လမ်းကြောင်းပျောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ကလူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ဆုချီးမြှင့်ခံရ
လမ်းကြောင်းပျောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ကလူ့အခွင့်အရေး လှ...
18 พ.ย. 2562 - 00:32 น.
၂၀၁၉ အတွက် Human Rights Tulip လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံက ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုကို မြန်မာ နိုင်ငံက လူပုဂ္ဂိုလ် တယောက်နဲ့ အဖွဲ့အစည်း တခုတို့က အသီးသီး ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်တုန်းက Synergy ဆိုတဲ့ လူမှု သဟဇာတ ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ကို တည်ထောင် လှုပ်ရှားသူ ကိုသက်ဆွေ၀င်း နဲ့ အမျိုးသမီး အရေးကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် ၂ခုကြာ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာ)WLB တို့ကို ငွေသားဒေါ်လာ တသောင်းဆုနဲ့ ကြေးရုပ်ထု တို့ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့မှာ အခမ်းအနားနဲ့ ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးက လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ အမျိုးသမီး အရေးတို့ကို တီထွင် ဖန်တီးမှု အစွမ်းနဲ့ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်သူတွေကို နယ်သာလန် နိုင်ငံက Human Rights Tulip လူ့အခွင့်အရေး ဆု နှစ်စဉ် ချီးမြှင့်လာတာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုနှစ် ကတည်းက ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့အခွင့် အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်စဉ်မှာ လူသားအားလုံး နိုင်ငံသားတိုင်း ပါဝင်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့လို့ အခုလို ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတာလို့ အကြောင်းကြားစာမှာ ဖော်ပြထားကြောင်း ဆုရရှိမှု နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုသက်ဆွေဝင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာ)WLB အနေနဲ့လည်း ပဋိပက္ခ စစ်မက် ဖြစ်ပွားရာနယ်မြေမှာ အမျိုးသမီးတွေ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် ခံရမှုကို ဖော်ထုတ်ကာ ကမ္ဘာမှာ အသိပေး နိုင်ခဲ့လို့ ဒီဆု ချီးမြှင့် ခံခဲ့ရတာလို့ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာ) ရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ ကရင် အမျိုးသမီး နော်ဆဲဆဲ က ပြောပါတယ်။
တသီးပုဂ္ဂလ အနေနဲ့ ဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုသက်ဆွေ၀င်း ဟာ အရင်က လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲ ရှိသူ တယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ကြတဲ့ စင်ကာပူမှာ ၂၀၀၈ ကနေ ၂၀၁၀ အထိ နေထိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာ သူ့အသိအမြင်တွေ ပြောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
လောကကြီးမှာ လူကောင်းနဲ့ လူဆိုးဘဲ ရှိပြီး ဘာသာရေး လူမျိုးရေးအပေါ် အခြေခံပြီး ခွဲခြားမှု မရှိသင့်ဘူး ဆိုတာ သိလာရတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း အတွင်း တယောက်နဲ့ တယောက် တဖွဲ့နဲ့ တဖွဲ့ကြား အမုန်းတရား အာဃာတတွေ မမြင်လိုတဲ့ အတွက် ၂၀၁၂ ကစလို့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ မဖြစ်အောင် ကြိုးစားရင်း ဒီအရေးမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်လာခဲ့တာလို့ သူက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုလပိုင်းတွေ အတွင်း လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပေါ်မှု မရှိဘဲ ငြိမ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒါဟာ ခဏသာ ဖြစ်တာလို့ ထင်မြင်ကြောင်း ၊ နိုင်ငံတကာ ဖိအားတွေကြောင့် နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေက ဘာသာရေး လူမျိုးရေးကို အာရုံထား လုပ်ဆောင် လာကြတာ တွေ့ရကြောင်း ၊ မလုပ်မဖြစ် ဖိအားတွေကြောင့် လုပ်ဆောင်နေကြတာသာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ရင်ထဲက မပါတဲ့ တန်းတူညီမျှမှု မပေးချင်တာမျိုးတွေ မရှိသင့်တော့ဘဲ ခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်တိုင်က ရင်ထဲက ပါတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ကြောင်း ၊ ဒါမှသာ ရေရှည် တည်တံ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကိုသက်ဆွေ၀င်းက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာ စာတမ်းမှာ ကြည့်ရင် ဘာသာ လူမျိုး မခွဲခြားဘူးလို့ ဖော်ပြထားသလို နိုင်ငံတော် သီချင်းမှာ ဆိုရင်လည်း တရားမျှတ လွတ်လပ်ဖို့ တန်းတူညီမျှ ရှိဖို့ ကိစ္စတွေ ပါ၀င်ပေမယ့် ခုနှစ်ပိုင်းတွေ အတွင်း လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ခွဲခြားမှုတွေ ကြုံရတဲ့ အခါတိုင်း သူ့အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း ၊ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါတိုင်း သူ့အနေနဲ့ သွားရောက် ကူညီတဲ့ အခါတိုင်း အောင်မြင်တာတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် ဒါတွေကိုကြည့် ကျေနပ်အားရ လုပ်မနေနိုင်ဘဲ စနစ်တခုလုံး မပြောင်းနိုင်သရွေ့ ကျေနပ်မှု ရှိမှာ မဟုတ်သလို လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုလုံးက စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ခြုံကျနေတယ်လို့သာ မြင်မိကြောင်း သူက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း အတွင်းမှာ လူသား စံနှုန်းတွေ ပျောက်နေတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာမှု မရှိဘဲ ဖိနှိပ်ခံရသူတွေကို ကြုံတိုင်း သွားကူခဲ့ပေမယ့် အားမလို အားမရစိတ်တော့ ဖြစ်မိတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ ရေရှည် တည်တံ့တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို မြင်ချင်ရင် နိုင်ငံရေး စိတ်စေတနာတွေ ပြောင်းဖို့ လိုနေပြီလို့ သူက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး အချိုးဖောက်ခံရဆုံး အချက် ၅ ချက်
အနာဂတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်ရာမှာ နိုင်ငံမှာ သြဇာ တိက္ကမ ကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တယောက်ယောက်က စံနမူနာကောင်းတွေ ချပြ ပြောပြ ပေးဖို့ လိုသလို စံထားရမယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဆိုတာ ဘယ်လို ပုံမျိုး၊ အဲဒါမျိုး ဖြစ်အောင် ဘယ်လို တည်ဆောက်ကြမလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်း၊ ဒါမှသာ တိုင်းပြည်က လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ လက်ရှိတော့ လမ်းကြောင်းပျောက်ကာ ဘယ်သွားလို့ သွားရမှန်း မသိတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ လူမှု သဟဇာတ ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့အနေနဲ့ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေ ပေါင်းပြီး ချီးမြှင့်တဲ့ လောကသာရ ဆုကို မနှစ်က ဆွတ်ခူး ရခဲ့ဖူးပြီး အခု ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ ဆုကတော့ ဒုတိယမြောက်ဖြစ်တယ်လို့ ကိုသက်ဆွေ၀င်းက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ ရတဲ့ ဆုကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး ရပ်တည် လှုပ်ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်း တခုအနေနဲ့ အတိုင်းအတာ တခု အထိ အင်အား ဖြစ်စေပြီး ဒီလို နိုင်ငံတကာ ဆုရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာ မိပေမယ့် သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ နောက်ပြန် လိမ့်မသွားစေဖို့ ဒီဆုက ဂျမ်းတုံး တခုသဖွယ် မြင်မိတယ်လို့ ကိုသက်ဆွေ၀င်းက ခိုင်းနှိုင်း ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆုချီးမြှင့် ခံရတဲ့ နောက် အသင်းအဖွဲ့ တခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် မြန်မာပြည်က နော်ဆဲဆဲ ကလည်း သူတို့ အနေနဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ စစ်မက် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ရာ ဒေသမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် ကျူးလွန်ခံရမှုပေါင်း ၆၀ ကျော်ကို ဖော်ထုတ် အစီရင်ခံစာ တင်ပြ ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဖိနှိပ်ခံနေရမှုတွေကို ဖော်ထုတ် ပြသ နိုင်ခဲ့လို့ ဒီဆုကို ချီးမြှင့်ခံရတာလို့ ဆိုပါတယ်။
တည်ထောင်လာတာ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် အတွင်းမှာ တိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီး အဖွဲ့တွေ အများအပြား ပါ၀င် ခဲ့ပြီး WLB အနေနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းကလည်း နိုင်ငံတကာဆု နှစ်ဆု ရရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ နော်ဆဲဆဲ က ပြောပါတယ်။
အခုပေးအပ်တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒက်ချ် သံရုံးက ချီးမြှင့်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကျူးလစ်ပ် ဆုကို အသံအဖွဲ့ တည်ထောင်သူ ၊ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ မောင်ဆောင်းခ က မနှစ် ၂၀၁၈ တုန်းက ချီးမြှင့် ခံခဲ့ရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ လမ်းကြောင်းပျောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ကလူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ဆုချီးမြှင့်ခံရ